आईपीएलमा सन्दिप टिममा पर्लान ? - Nepal Cricket
आईपीएलमा सन्दिप टिममा पर्लान ?
इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा आज (आइतबार) दुई खेल हुँदैछ ।
आईपीएल अन्तर्गत आइतबार पहिलो खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यस्तै दोस्रो खेलमा कोलकत्ता नाइट राईडर्स र मुम्बई इण्डियन्सबीच खेल हुनेछ । नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको दिल्लीले घरेलु मैदानमा बैंगलोरसंग खेल्नेछ । दुई टोलीबीचको खेल अपरान्ह ४:०० बजे सुरु हुनेछ ।
फिरोज शाह कोट्ला मैदानमा दिल्ली बैंगलोरलाई पराजित गर्दै प्ले अफ नजिक पुग्न चाहन्छ । दिल्ली आठौं जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रने छ । तेस्रो स्थानको दिल्लीको ११ खेलबाट १४ अंक रहेको छ । दिल्ली घरेलु टोलीलाई हराएर शीर्ष स्थानको चेन्नई सुपर किङ्ससंगको अंक बराबरी गर्न चाहन्छ । चेन्नईको १६ अंक रहेको छ ।
यता बैंगलोर घरेलु टोलीलाई पराजित गर्दै अंक तालिका सुधार गर्न चाहन्छ । ११ खेलबाट ८ अंक जोडेको बैंगलोर पुछारमा छ । बैंगलोरविरुद्ध दिल्लीले नेपाली लेग स्पिनर सन्दीपलाई मैदान उतार्ने सम्भावना रहेको छ । सन्दीप घरेलु मैदानमा प्राय मैदान उत्रदै आएका छन् । सन्दीपले यस सिजन ५ खेलमा ८ विकेट हात पारिसकेका छन् ।
यस्तै कोलकत्ता नाइट राईडर्स र मुम्बई इण्डियन्सबीचको खेल राति ८ बजे सुरु हुनेछ । कोलकत्ताको मैदानमा हुने खेलमा मुम्बई जित निकाल्दै प्ले अफ नजिक पुग्न चाहन्छ । दोस्रो स्थानको मुम्बईको ११ खेलबाट १४ अंक छ ।
कोलकत्ता ८ अंक जोडेर पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ ।